Jaal Goolicha Dengee fi Jaal Marroo Dirribaa Galatoomaa! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsJaal Goolicha Dengee fi Jaal Marroo Dirribaa Galatoomaa!
Damee Boruutin, Guraandhala 23, 2019
Ajajoota WBO Z/L fi Z/K
Baga shira diina injifannoon irra aantan. Baga ayyaanni Uummata Oromoo irra isin dhaanse. Summii isiniif qophaawe warra baatee isini itti dhufteef haa tahu. Baga gammadan! Baga uummata keessan boonsuuf fi goobsuuf carraa guddaa kana argatan. Haati isiin deesse lakkuu lakkuu haa deessu. Waaqayyoo umurii dheeraa isiniif kennee akka galma qabsoo saba keessanii ijaan agartan halkanii fi guyyaa jilbefadhee isiniif kadhadha.
Isin goota goota caalu. Seenaa gootumma Uummata Oromoo badhaaftanii jirtu. Qarrree fi Qeerroon Oromoo isinii arge sii achii hidhannaa hin hiikkatu. Diinaafis jilbeefatee hin bulu. Ofii qabsawwe, ofii itti hidhamee, ofii tumamee, ofii waxxalamee, ofii itti ajjeesamee injifannoo isaa fakkeesituuf kennee taa’ee hin ilaalu. Akka ija banatu gochaa jirtu. Galatoomaa.
Durbeen Oromoo isiin weedisuun, ilmi Oromoo maqaa keessaniin geeraruun har’a. Gootota keenya utuu lubbuun jiranii faarsuu qabna. Gaafa duune qofa wal faarsuun haa dhaabbatu. Yaa Uummata Oromoo agartaa laata? Seenaan kee tufatamee, dhitamee Nafxanyaan alaaba kee irratti sirbaa jiru WBOn dafii miila kee irraa kaasii maldhu jechaa jira.
Waan qabdu maraan gootota kee kana wajjin dhaabbachuun dirqama kee akka tahe hin dagatiin. Akkuma WBOn itti dammaqe atis itti dammaquu qabda. Kana booda uummataa fi WBO gargar baasuu yaaluuf deema dagachuu hin qabnu. Maqaa Abbootii Gadaan ijoollee kee ficcisuuf shiraa deemaa ture saaxila bahaa jira. Abbootii Gadaa keessaa warri dhugaaf dhaabatanii nagaa buusuuf deeman jiru. Haa tahu malee mootummaan qajeelfamee kennee hojii mootummaa bakkaan gahuuf warri deemaan akka jiran ragaan argameera.
Warri Abbaa Gadaa nagaa yaadan mootummaa kijibduu kana wajjin akkuma aadaa Oromooti hojjechuuf yaaluun dogongora. Aadaan Oromoo nama hin ganu. Dhugaaf bulu. Mootummaan nama gana. Sobaan jiraata. Waan hundaa dura mootummaa kun waan Abbaan Gadaa murteessu akka hijii irra olchu wabii tokko hin qaban. Hojiin isaanii mootummaa nafxanyootan marfatee jirtu gargaaruuf akka tahe utuu hubatnii jiraatanii keessaa iyyuu qooda hin fudhatan ture.
Waa’ee araara kana Jawaar Mohammed fi Baqalaa Garba hatattamaan yaroo Abbootii Gadaa harkaa butan waan deemaa jiru shira mootummaan xaxxaama akka tahe saaxila bahe. Obbo Lammaa fi Kononel Abiyyi tooftaa Oromoo Oromoon cabsuu waan bareechanii baakanii shira kana qopheessan natti hin fakkaanne. Kanaafuu shira nafxanyoonni MNO keessa harka galfachaa, Motummaa Kononel Abiyiif immoo gorsitoota tahanii irraa malli kun kan madde fakkaata. Kanas Shira Jaarraa Digdamii Tokkoffaa Uummata Oromoo irratti deemaa jiru jedhee yaroo darbe saaxiluuf yaaleen ture.
Guyyaa digidamii shan darbaniif diraamaa Jawaar fi Baqalaa teenye ilaaluu malee waan goonu hunduu nu harkaa bade ture. Baayyeen keenya teenye guyyaa lakkawwaa jirra. Hara’a immoo boruu booyyicha nutti himu jedhee guyyaan hiriba malee bulu jira. Akka isaan yaadan utuu hin taane anaaf guyyaa gammachuu, guyyaa sirbaa naaf tahee jira. Baqalaa fi Jawaar walluu salphinaa mataatti maratanii gara warra salphoo isaan ergate haa deebi’an.
WBOn goota akeekaa fi kaayyoo ganamaa qabu. Gaafa kaayyoon isaa guute innuu waamcha malee ni gala.WBOn namoota sobduu kaleessa dhiiga ilmaan Oromoo dhangalsa turte, har’a uummata Oromoof hojjechaa jirti jedhee hin amanu. Warri mootummaan kan Oromooti jedhee kijibu yaroo lafa irratti uummata Oromoof hojjetamu hin agarru. Finfinnee bakka Mamoo Mazamiir itti fanifamee fi bakka J. Tadasaa Biruu itti rashaname irratti siidaa mootii Habashaa dhaabuu kan caalu Uummata Oromoo arbsoon hin jiru.
WBO keessatti afaanfajii uumaniif, amma isaanii danda’amee gargar diiguu fi bakka bakkatti facaasuuf yaalanii jiru. Hawwiin mootummaa guutuu hin dandeenye. Ammam iyyuu haa dhama’an WBOn faca’uu ooluun Uummata Oromoof misiraachoo guddaa dha.
Qajeelfamnii isaanii akka warra meeshaa hidhatee jiru qofa galshuu tahe Abbaan Gadaa durii Bayyanaa Sanbatoo dubbatee jira. Namuma karaa irra deemu hundaa gara kaampi akka galchuu yaala akka jiran jiraatan naannoo Maqanajjoo tokko reediyoo RSWO kaleessa gabaasaa ture.
Kufaatii Shira kanaaf inni guddaan:
Jawaarii fi Baqalaan warra Abba Gadaa irraa mootummaa wajjin wal tahanii hojii araaraa harka baafachuu.
Yaroo waraanni itti galuu qabu baayyee gabaabsuun daddaaffiin utuu hin dammaqamiin hojii isaanii xumuruuf jarjaruu.
Waraanaa fi uummata Oromoo nannoo waraana jiru mariisuusu waan yaroo fudhatuuf akka hafu filachuu.
Haayuu Duree biyya lafaa duratti erga waraana isaa Abbotii Gadaa fi Uummata Oromoo keneen jira jedhee as maqaa Haaya Dureen Haaya Dureen galaa jedhee xalaayya barreesse jechuun dhugumaas hin qabu. Utuu barreesse jiraate iyyuu seera ijaarsaanis tahe akka aadaa itti fudhatama hin qabu.
Warra galaa jedhaniif nageenya isaaniif mootummaa biraa wabii (guarantee) tokko illee of harkaa dhabuu.
“Karaa sobaan deeman irra deebi’uuf nama dhiba” akkuma jedhan waan isaan galanii odeessuf deeman hin beeknu. Garuu Qarree fi Qeerroon Ormoo, walii gala Uummatni bal’an Oromoo warra hojii yakkaa hojjetu kana abaaruu fi dura dhaabbachuu qaba. WBOn haa lalisuu, dagaagee haa bargaagu, injifannoo irratti injifannoo haa gonfatu. Uuumata isaa bilisummaa haa gahu!
Ethiopia: The Present and the Future Prognosis
Proud of your determination to fight ethiopian-colonialism. You are my true and legendary heroes than those who succumbed and not only took up fascist-ethiopian citizenship but also accept abiy flourish colonial rule over Oromia.
I am eternally grateful for your sacrifice to liberate me from the yoke of ethiopian colonialism.
Long live OLF/OLA!